.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash ပုံ လှလှလေးတွေ လိုချင်သူများအတွက်..
Flash ပုံ လှလှလေးတွေ လိုချင်သူများအတွက်..
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Flash Song လုပ်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သတင်းကောင်းလေး တစ်ခု ပြောချင်တယ်...
သိထားတာတော့ ကြာပြီဗျ..သေချာ မကြည့်ဖြစ်တာ သူငယ်ချင်းတို့တော့ စဉ်းစားမိကြလား မသိဘူး..
သူများတွေလုပ်ထားတဲ့ Flash Song လေးတွေဆို အထဲမှာ Flash ပုံ အရှင်လေးတွေ လှနေတာပဲလေ
သူတို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်လဲ.??? အဲဒီပုံလေးတွေ ဘယ်က ရလဲဆိုတာပေါ့...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ အလုပ်လည်း သိပ်မရှိတာနဲ့ သေချာလျှောက်ကြည့်လိုက်တော့....အားပါးး
နည်းတာ မဟုတ်ဘူး..သေချာရှာလေ တွေ့လေပဲ ဟိဟိ...ရှာဖွေ လေလေ တွေ့ရှိလေလေပေါ့နော်
ကျွန်တော် နမူနာနည်းနည်းတော့ ဆွဲလာခဲ့တယ်..သပ်သပ်တော့ တင်မပေးတော့ဘူးနော်..
သူငယ်ချင်းတို့ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေ သွားရွေးပြီး ဒေါင်းယူလိုက်တော့နော်..
Flash ပုံလေးတွေတင် မဟုတ်ဘူးနော် မောက်အဖက်တို့ ဖောင့် အလှတို့ တစ်ခြား အစုံပါပဲ..
ကျွန်တော်တောင် ရှာရှင်းနဲ့ ကြိုက်တာလေးတွေ တွေ့လ်ို့ ဒေါင်းလိုက်တာ တော်တော်များတယ်..
သူငယ်ချင်းတို့လည်း အားရ ပါးရသာ သွားဒေါင်းဗျာ..ပိုက်ပိုက်ပေးရဘူးနော်..:D
Posted by Thurainlin at 08:34
ရာဇာထွေး 25 August 2012 at 09:04
Fzwp.com အဖက်လေးတွေကို ဘယ်ဒေါင်းရတယ် ဆိုတာရယ်၊
တွေ့ထားတာကြာပါပြီ...ဥပမာ အကိုတင်ထားတဲ့ သတို့သားသတို့
သမီး အဖက်လေးကို ဆော့ဝဲထဲထည့်လိုက်ရင် အဖက်တွေကပုံမှန်မရ
ဘဲ သတို့သမီးဝတ်တဲ့ ဇာအင်္ကျီနဲ့ ပုဝါက ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်နေ
နောက်ပြီးကျွန်တော်သုံးတာ SWiSH Max4 နဲ့ portable SWiSH Max4 4.0 ပါအကိုရေ...အသုံးပြုပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပါ
ခင်ဗျာ... yarzar.htwe5@gmail.com ကျွန်တော့်အကောင့်လေး
ကိုအကိုအားတဲ့ အခါမေးလ်ပြန်ပို့ပေးပါ အကိုရေ...
Thurainlin 25 August 2012 at 23:19
အစ်ကိုရေ ဒီလင့်လေးကိုသာ နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့..
အစ်ကိုသိချင်တာတွေ အားလုံး သိနိုင်လောက်တယ်..
ကျွန်တော်လည်း Flash Song လုပ်တာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်..
လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်...